मोनालिसाको नयाँ भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । मोडल मोनालिसा पराजुलीले प्रेमीसँग गरेको रोमान्स बाहिरिएको छ । उनले यी कुराहरु आफ्नो निजी जीवनमा नगरी गायक सुबास खत्रीको ‘कुराहरु खेल्छन’ बोलको गीतमा गरेको अनस्क्रिन रोमान्सलाई निर्देशक युब...
मेलिना राइ को ‘हिजो सम्म अञ्जान’ सार्बजनिक
काठमाडौं । मेलिना राइको हिजो सम्म अञ्जान बोलको गीत सार्बजनिक भएको छ । भर्खरै सार्बजनिक भएको हिजो सम्म अञ्जान बोलको गीतलाइ बेनि बजार र आसपासको क्षेत्रमा छायांकन गरिएको बताउछन् छायाकार दिनेश पराजुली । ...
काठमाडौं । सिटी मेट्रो प्रालिले शुक्रवारबाट उपत्यकामा अपाङ्गमैत्री बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल १५ वटा त्यस्ता बस सञ्चालनमा ल्याइएको हो । एउटा बसमा ४४ वटा सिट रहेका छन् । अपाङग, ज्येष्ठ नागरिक र बालब...
आकास्मिक कोष विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्ले सङ्घीय आकस्मिक कोष विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । यस अघि बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विध...
नन्दराम परियारले कसलाई दिए सराप
काठमाडौं । चर्चित गायक खुमन अधिकारीको लय शृजना अनि बिष्णु न्यौपानेको शब्द शृजनामा नन्दराम परियारको ठट्यौली गीति कोशेली 'यती सराप दिएँ' हिम सम्झौता डिजिटल प्रा. लि. ले बजारमा ल्याएको छ । यस गीतमा खु...
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा इतिहाँस रच्न सफल चलचित्र छक्कापञ्जाको देखन चम्पा सुनन चम्पा बोलको गीत सँगसँगै अहिले गायक कृष्ण काफ्लेको चर्चा पनि उत्कर्षमा छ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रलाई ...
श्रृष्टिको मायामा के बन्यो तगारो (भिडियो सहित)
https://www.youtube.com/watch?v=d9wGVz_lvj0 गायक राज कुमार गोस्वामीको नयाँ गीत ‘काँडाघारी’ केहि समय अगाडी सार्बजनिक गरिएको थियो । सार्बजनिक भए संगै गीतले यु ट्युबमा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो । ...
सिड्नीमा धुर्मुस सुन्तली साँझ, मुसहर बस्ती निर्माण जुट्यो १७ लाख
काठमाडौं । पुर्ननिर्माणमा जुटिरहेका चर्चित हास्य कलाकार धुर्मुस सुन्तली अर्थात सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे अहिले अष्ट्रेलियामा आयोजना भइरहेको कार्यक्रमहरुमा सहभागि भइरहेको छन् । उनीहरु अहिले मह...
भारतिय टिभी सो झलक दिखलाजाको ताज नेपाली चेली तेरियाको पोल्टामा
काठमाडौं । नेपाली चेली तेरिया मगरले भारतको चर्चित टेलिभिजन ‘सो झलक दिख ला जा’को ट्रफि जितेकी छिन् । बलिउड अनलाइन बलिउड लाइफका अनुसार उनले अन्य २ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै तेरियाले उक्त यो शो जितेकी ह...
आमिर खानको सेक्स भिडियो बन्यो भाइृरल, श्रीमति तनावमा
एजेन्सी । बेलायती बक्सर आमिर खानको सेक्स भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । भिडियो सार्वजनिक भएसँगै उनको वैवाहिक जीवन संकटमा परेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । पाकिस्तानी मुलका आमिरको महि...
काठमाडौं । गायक सरन गुरुङ नयाँ गीत ‘यो मन’ लिएर दर्शकमाझ आएका छन् । पोखरामा छायांकन गरिएको भिडियोमा आकाश श्रेष्ठ र माला लिम्बुले फिचरिङ छन् । सुन्दर माछापुच्छ्रे, फेवाताल, सरागंकोट लगायतका स्थानहरुला...
काठमाडौं । गायक मोहन के राईले ‘तिमीसंग’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । विभोर पोखरेलद्वारा निर्देशित यो भिडियोमा नायिका वर्षा शिवाकोटी तथा भिडियो जक्की रोशन लामाले अनस्क्रिन रोमान्स गरेका छ...
गायक तथा संगीतकार बिनोद ढकालको नयाँ म्युजिक भिडियो “बाजेले गितार बजाको” सार्बजनिक
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली सुगम सगतिमा अत्यन्तै चर्चित नाम गायक, संगीतकार तथा मोडल बिनोद ढकालले भर्खरै नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन । उक्त भिडियोलाई एसियन म्युजिकले बजारमा ल्यायको हो भने गायक बिनोद...
सुभेच्छा थापाको मलेशियामा छायांकन भएको नयाँ म्युजिक भिडियो यु ट्युवमा(भिडियोसहित)
नायिका सुभेच्छा थापाद्धारा अभिनित नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। म्युजिक भिडियोमा शब्द प्रशान्त सुनार को रहेको छ भने स्वर योगेश काजी ले दिएका छन। अभिनय मा भने सुभेच्छा थापा, मनु थापा र निक शर्म...
डेढ दशक भन्दा बढी समयदेखी रंगपत्रकारितामा लागेर आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएका पत्रकार रामबहादुर सुवेदी ‘आरके’ पछिल्लो समय भिन्न तरिकाले नेपाली चलचित्रको प्रमोशनमा लागि परेका छन् । फुटवल र अवार्ड जस्ता...